FHI: Jawaabaha su´aalaha ugu badan ee covid-19 oo af soomaali ah. - NorSom News
FHI: Jawaabaha su´aalaha ugu badan ee covid-19 oo af soomaali ah.
Waaxda caafimaadka dadweynaha ee FHI, ayaa iyada oo kaashaneyso dhakhaatiir iyo khuburo caafimaad ayaa luuqado dhowr oo af-soomaali uu kujiro ku diyaariyay jawaabaha su´aalaha ugu badan ee dadku ay iska weydiiyaan xanuunka Covid-19.
Su´aalahaas oo la xiriira dhamaan waxyaabaha caafimaad ahaan ku wareegsan xanuunkan, sida uu saameyn ugu yeesho dadka kale iyo su´aalo kale.
Halkan ka akhriso jawaabaha su´aalaha FHI oo Af soomaali ah
Previous articleTrump: Waxaan hayaa cadeyn sheegeyso in Corona-virus Sheybaar shiinaha kuyaal lagu sameeyay.
Next articleDaawo: Talooyin la xiriira soonka iyo macaanka (diabetes)